Muuji Qodobbadaada Muuqaalka leh Plugin – Sare 10 – Fure հաղորդագրություններ, այնպես էլ խելամիտ WordPress
1. Raadi fiilada, ka shaqee oo ka soo qaad cutubka WP. Ama waxaad soo dejisan kartaa plugin sidii faylka zip ah oo aad ku dhex mariso macaamil FTP ah oo aad taqaanid ka dibna furfuran. (Այսպիսով, WordPress / wp- պարունակություն / plugins- ի միջոցով)
Laga soo bilaabo bogga goobaha plugin, plugin wuxuu bixiyaa wax badan oo ku saabsan habka dabacsanaanta iyo habeynta. Waxaad soo bandhigi kartid posts caan ah laga soo bilaabo maalinta la soo gaveafay, ama tiro maalmo ah. Xitaa waxaad xitaa u dhigan kartaa dhowr saacadood, haddii website-kaaga uu soo saaro nuxur xawaare ah. Waxaad dooran kartaa in aad eegto astaamaha laga bilaabo markii ugu horeysay ee lagu daabaco boggaaga.